Ginger | November 2019
Noocyada watermelons iyo faa'iidooyinkooda jirka aadanaha
Editor Ee Doorashada November 14,2019
Ugu Weyn Ee Ginger
Sidee loo kobciyaa sinjiga: dhirta iyo daryeelidda warshad
Si sax ah loogu yeedho guriga kufsiga waa adag tahay. Qaar ka mid ah cilmi-baarayaashu waxay aaminsan yihiin in xayawaanka dabiiciga ahi yahay Hindiya, qaar kale - Koonfur-bari Asia. Intaa waxaa dheer, way adagtahay in la yiraahdo xitaa halka uu ka yimid dalalkeena: laga bilaabo Galbeedka ama Bariga. Maanta waxaa si firfircoon loogu isticmaalaa daawooyinka, cunto karinta, laakiin loogu talagalay tarbiyadda guriga mar walba lama qaato.
Waxyaabaha kiimikada ee ginger-ka: hababka waxtarka leh iyo ka-hortagga
Ginger waa wakiil gaar ah oo flora ah. Waxaa loo isticmaalaa karinta iyo daawada labadaba. Ninkeena, dhawaan ayuu joogsaday si loo tixgeliyo qalaad. Laakiin warshadkan waxaa loo yaqaanaa aadanaha muddo ka badan laba kun oo sano. Maqaalka waxaan ka hadli doonaa halabuurka, sifooyinka iyo saameynta sinjiga jirka. Ginger: Qaybta kiimikada ee Goobta Ginger waxaa ku jira biyo, qadar badan oo macdan ah oo faa'iido leh (magnesium, fosfooraska, calcium, sodium, birta, zinc, potassium, chromium, manganese, silicon), fitamiino (A, B1, B2, B3, C, E, K), acids (oleic, caprylic, linoleic), borotiinno, oo ay ku jiraan amino acids (leucine, valine, isoleucine, threonin, lysine, methionine, phenylalanine, tryptophan), asparagine, glutamic acid, iyo sidoo kale dufanka, carbohydrates (sonkorta).
Sidee ayuu shaandhadu u isticmaali karaa, oo waxyeello ma yeeshaa
Shaandheerna cabitaanka ayaa ah cabitaan kaas oo kaa caawin doona helitaanka jirdhiska jirka iyo isafgaradka jidhka ee lagama maarmaanka ah. Waxaa loo adeegsaday bogsashadii hore ee Hindiya iyo Shiinaha, kaas oo markii dambe lagu dhex maray Yurub oo gaaray waqtiyadayada qaabkale oo aan waxba kala beddelin. Shaandheerna shaashadda Dunida hadda waxaa jira ilaa soddon nooc oo sinjibiin ah, iyo noocyo badan oo ah shaaha faleebada ah - oo aan la qorin.
Faa'iidooyinka iyo hababka ugu fiican ee lagu keydsho strawberries jiilaalka
Dhamaan dabacasaha jaalaha ah: laga soo bilaabo taariikhda xulashada si loo beerto iyo goosashada
Video: sida loo dhiso pergola gacmahaaga?
Isticmaalka xididdo leh sonkorow mellitus: ama ma ku dari khudradda cuntada ee noocyadda 1aad iyo 2aad ee cudurka?
Sidee waxtar leh iyo sida loo soo ururiyo berry dhirta
In kasta oo xaqiiqda ah in noocyada badan ee orchids ay yihiin kuwo aan qabin daryeel, marka ay geedi socodka ku baxayaan waxaad la kulmi kartaa dhibaatooyin tiro badan. Kuwa ugu badan ee ka mid ah kuwani waa jahawareer. Tani waxay si gaar ah u tahay xilliga dayrta-xilliga qaboobaha. Waxay dhacdaa in dhimashada dhamaystiran ee xididdada iyo caleemaha orchid dhacdaa. Read More
Intee in le'eg ayay tahay in spathiphyllum dib loo soo celiyo marka goorma sida ugu fiican ay tahay in la sameeyo?
Waa maxay tufaaxa lagu beeray dhul furan
https://lezgka.ru so.lezgka.ru © Ginger 2019